को हुन् योगेश भट्टराई ? - नयाँपुल अनलाइन डटकम
प्रकाशित मिति : Wednesday, July 31, 2019 nayapulonline
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता योगेश भट्टराईले नागरिक उड्डययन तथा पर्यटनमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएकाे छ । बुधबार शितल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवीले नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री भट्टराईलाई शपथ गराउनुभएकाे हाे ।
भट्टराई २०२३ भदौ २१ गते ताप्लेजुङको साँघु (मैवाखोला गाउँपालिका–३) मा आमा महेन्द्रादेवी र बुबा स्व. भीमलालका कान्छा छोराका रूपमा जन्मिनु भएको हो ।
२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको रापताप बिस्तारै गाउँसम्म फैलिँदै थियो । गाउँसम्म अनेरास्ववियुको चर्चा हुँदै थियो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध गाउँगाउँबाट उठ्नुपर्ने सन्देश मादीसम्म त्यतिबेला पुगिसकेको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध २०३७ चैत १४ मा पहिलोपटक अनेरास्ववियुले हामहडताल गर्‍योे ।
नेपालकै पहिलो ऐतिहासिक हडताल सफल पार्न उहाँ सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभयो । संगठित हिसाबले उहाँको राजनीतिक यात्राको आरम्भ पनि त्यही थियो । स्वविवेकले आन्दोलनमा होमिनुभएका योगशले स्कुले जीवनपछि भने ताप्लेजुङका अगुवा शिक्षकहरू डिल्ली घिमिरे, हरि घिमिरे, बोलिनन्द फागोबाट राजनीतिक सम्पर्क र शिक्षा पाउनुभयो ।
पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्ध दृढतापूर्वक अघि बढ्दै जाँदा उहाँले थुप्रैपटक जेलनेल र कठोर यातना भोग्नुपर्‍यो । जेल बसाइका बेला झापा संघर्षका चर्चित अगुवाहरू केपी ओली, आरके मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारीलगायत राजनीतिक बन्दीहरूसँग नजिकबाट अन्तक्र्रिया गर्ने अवसर पाउनुभयो, जसबाट राजनीतिक यात्रालाई अझ निखर बनाउन सहयोग पुग्यो ।
यही क्रममा उहाँले अनेरास्ववियुको काठमाडौं जिल्ला कमिटीको सदस्य तथा बाग्मती अञ्चल कमिटीको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । आन्दोलन र राजनीतिक जिम्मेवारीसँगसँगै उहाँले आफ्नो पढाइलाई पनि निरन्तरता दिइरहनुभएको थियो । त्यहीबीचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र/मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसमेत गर्नुभयो ।
पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त गर्न पञ्चायती चुनावलाई उपयोग गर्ने पार्टी नीतिलाई कार्यान्वय गर्ने सिलसिलामा २०४३ सालमा भएको निर्वाचनमा केही समय काठमाडौंमा र बाँकी समय ताप्लेजुङका सम्मानित व्यक्तित्व अम्बिका साँवाको चुनावी अभियानमा बिताउनुभयो । जनपक्षीय उम्मेदवार साँवाको चुनाव प्रचारका क्रममा रातिराति साथीभाइसँग संगठन गर्दै जनताको घरआँगनमा मकैभटमास खाँदै हिँडेको सम्झना अहिले पनि उहाँसँग ताजै छ । साँघुमा चुनाव प्रचार गरिरहेको बेला २०४८ साल वैशाख १० गते सिनाममा एमालेका कार्यकर्ता क. इन्द्र थेबे र क. रुकमान थेबे हत्याको खबर सुन्नुपर्‍यो । हत्याको खबरले उहाँलाई दुखित त बनायो तर त्यसलाई अझ शक्तिका रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प थिएन । उहाँले त्यसै गर्नुभयो ।
उतिखेर साँघुमा माध्यमिक र उच्च शिक्षा शिक्षा नभएक कारण योगश संखुवासभाको मादी हुँदै काठमाडौं आउनुभयो । तर, ताप्लेजुङसँगको सामीप्य र ताप्लेजुङका जनताको सम्बन्ध भने सधैं कसिलो रह्यो । देशको आशाको अनुहार त हुँदै हुनुहुन्छ, ताप्लेजुङ र ताप्लेजुङे जनताको असल अभिभावकको भूमिकासमेत उहाँले निरन्तर निर्वाह गरिरहनुभएको छ ।
ताप्लेजुङको विकास र समृद्धिका लागि काठमाडौंमा हुने अभियानमा मात्रै होइन, सकेसम्म जिल्लामा भएका अभियानमा समेत उहाँ सधैं सक्रिय सहभागी हुनुभयो । ताप्लेजुङको समग्र विकासका निम्ति उहाँहरूकै सक्रियता र अगुवाइमा २०६४ सालमा ‘ताप्लेजुङ सरोकार केन्द्र’को स्थापना भयो । उहाँ त्यसका संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो, जसले ताप्लेजुङको विकासका लागि केन्द्रीय तहमा उहाँकै नेतृत्वमा बहसहरू सुरु गर्‍यो ।
केही दिनपछि सिन्धुुपाल्चोकको चौतारामा लगेर राखियो । प्रजातन्त्र आएपछि मात्रै उहाँलाई छाडियो । पञ्चायतले चुनौतीका रूपमा राखेको विद्यार्थी नेता भएकै कारण आन्दोलनको सुरुमै पक्राउ गरिएको थियो । उहाँ सम्झनुहुन्छ, ‘२६ गते राति हामीलाई पनि जेलबाट छोडियो । भोलिपल्ट हामीलाई बिहानै गाडीबाट काठमाडौं ल्याइयो ।
चौताराबाट आउँदा बाटैभरि रमाइला दृश्यहरू थिए । दोलालघाटमा धेरै मान्छेहरू रातो झन्डा बोकेर नाचगान गरिरहेका थिए । पहिलोपटक त्यति धेरै मानिसले कम्युुनिस्टको झन्डा बोकेर निस्किएको देख्दा असाध्यै खुसी लाग्यो । हामी सिधै खुलामञ्च गयौं । खुलामञ्चमा मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, झलनाथ खनाल, कृष्णप्रसाद भट्टराई, साहना प्रधान, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतले बोल्नुुभयो । प्रजातन्त्र आएको त्यो दिन हर्ष र गौरवको दिन थियो ।’
जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको रहस्यमय हत्याविरुद्धको आन्दोलनमा अगुवाइ उहाँले नै गर्नुभयो । यस्तै, अनेक आन्दोलनबाट खाँरिदै, माझिँदै युवा जोस र उत्साहका साथ अघि बढिरहनुभएका योगेशले खासगरी २०५०/५१ सालतिर शिथिल भएको नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनलाई नेपाली समाजमा पुनःस्थापित गराउनुभयो ।
आज पनि युवाहरू अखिल भन्नेबित्तिकै योगेश भट्टराईलाई सम्झन्छन् । उहाँ अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुनुभएका बेला सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत क्याम्पसका स्ववियुमा अखिलले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो पालामा पहिलोपटक ७३ प्रतिशत कलेजमा स्वावियुु चुनाव जित्यौं । विद्यार्थी आन्दोलनलाई शैक्षिक ऐजेन्डातिर केन्द्रित गर्‍यौं ।’ विद्यार्थीलाई विभिन्न सार्वजनिक स्थल तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमा छुट गराउने आन्दोलनको नेतृत्व पनि उहाँले नै गर्नुभएको थियो, जुन सुविधा अहिले पनि विद्यार्थीहरूले उपभोग गरिरहेका छन् ।
योगेशले २०६२/६३ मा सम्पन्न ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा नेकपा (एमाले) को काठमाडौं उपत्यका कमिटीको सचिवका रूपमा आन्दोलनको संयोजन र परिचालनमा कमान्डरको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । उपत्यकामा आन्दोलनको उभार ल्याउनमा उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका थियो ।
आन्दोलनमा उपत्यकाभित्र अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा १२ बुँदे सहमतिपश्चात् तत्कालीन माओवादीलाई समेत समन्वय गर्न अग्रणी भूमिका खेल्नुभयो । जनक्रान्तिका बेला उहाँका योगदानको प्रशंसा र सम्झनामा लेखिएका हजारौं लेख, रचनाले उहाँको छवि राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत परिचित गरायो ।
शान्तिपूर्ण अप्रिल क्रान्तिले लोकतान्त्रिक राजनीतिक क्रान्तिका मुख्य कार्यभार पूरा भएकाले अब आर्थिक क्रान्तिलाई मूल मन्त्र बनाएर राष्ट्रको आर्थिक/सामाजिक समृद्धिका लागि सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्दछ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण रहेको छ । देशबाहिर पोखिएको नेपाली युवाहरूको रगत र पसिनालाई नेपाली माटोमा नै एकाकार गराउनुपर्ने कुरामा उहाँको जोड छ । ‘सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले श्रम गर्दै उत्पादनका काममा लाग्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजी र उद्योगको विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सबैले अनिवार्य कर तिर्नुपर्छ । अनि मात्र देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ । युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ,’ उहाँको मूलमन्त्र छ ।
अज्ञात समूहद्वारा मेलम्चीको १० नम्बर वडा कार्यालयमा आगजनी
हामीले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण स्रोत साधन परिचालन गरेका छौंः अध्यक्ष रिमाल
जनतालाई भड्काउने छुट कसैलाई छैनःअध्यक्ष प्रचण्ड